Top 5 Best Ọnọdụ Iji Wepụta Christmas | Save A Train
Home > Travel Europe > Top 5 Best Ọnọdụ Iji Wepụta Christmas
Oge Ọgụgụ: 5 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 30/01/2021)
2018 fọrọ nke nta na njedebe, nke pụrụ nanị ịpụta na Christmas bụ nso! Ndị mmadụ na-ka na-anaghị ejikere maka ya, ma n'ihi na ndị njem, ọ bụ nnukwu oge na-eme atụmatụ a njem. Ọ bụrụ na ị na-achọ nri obodo-eji Christmas na, anyị na-na na nwetara gị kpuchie.
Isiokwu a ga-enye gị a zuru ezu ndepụta nke kacha mma n'obodo na-eji Christmas na. Ihe bụ ihe ọzọ, anyị ga-agwa banyere ihe niile na-akpali akpali ihe i nwere ike ime n'ebe, ma ihe, ga-esi ruo obodo ndị a ụgbọ okporo ígwè.
Amsterdam nwere a pụrụ iche n'ebe a ndepụta dị ka ememe ndị e na-amalite ọtụtụ mbụ. Malite na November, ndị si Amsterdam amalite usọrọ Christmas na ndị ọzọ niile na oyi ihe.
The Museum Square na center nke obodo-agbanwe n'ime a fairytale Christmas obodo. Ebe i nwere ike na-enwe otu n'ime ndị kasị mma Christmas ahịa na Europe. Ọ karịa eruo Amsterdam dị ka onye nke kasị mma n'obodo na-eji Christmas.
Amsterdam a maara nke ọma n'ihi na ya na ọmarịcha ụlọ na ọtụtụ ọwa mmiri, ma obodo awade a otutu ihe. Ị pụrụ ịnụ ụtọ ice iji atụrụ, Feris wịịl agafe, mma oriri na a dịgasị iche iche nke ihe ọṅụṅụ, na ọtụtụ ndị ọzọ.
I nwekwara ike na-enweta Christmas na ọbụna mgbe ụbọchị nsọtụ. N'echi Christmas, ndị Amsterdam usọrọ Boxing ụbọchị.
Ị nwere ike ịga Amsterdam ụgbọ okporo ígwè si fọrọ nke nta n'ebe ọ bụla Europe. The Central ojii ejikọ Paris, Frankfurt, Brussels, London, Zurich, Berlin, Prague, na ọtụtụ ndị ọzọ. E nwere mgbe e ka ọtụtụ n'ime ha na ọtụtụ ndị ọzọ na obodo na Netherlands. Ya mere ọ bụrụ na ị chọrọ na European ụgbọ oloko ị pụrụ ịnụ ụtọ ọtụtụ nke Best Ọnọdụ ka Wepụta Christmas na 1 njem.
Best Ọnọdụ ka Wepụta Christmas, coldest ghota – Stockholm, Sweden
Ọ nwere ike na-oyi, ma ị ga-ka na-n'anya na ị họrọ na-na Stockholm maka Christmas. Sweden bụ mba na-na n'oge oyi ememe n'ihi na Swedes outdo onwe ha.
Obodo ya na-mara mma na mma n'oge ezumike, na ọ na-enye ihe ma oge a na omenala. Ọ bụ a n'elu nhọrọ dị ka onye nke kasị mma obodo na-enwe Christmas.
E nwere ọkụ na n'ebe nile na Christmas ahịa na n'okporo ámá na-ekpo ọkụ oriri na ọṅụṅụ. Ị ga-crazy bụghị na-agbalị na-atọ ụtọ freshly butere cinnamon buns ma ọ bụ gingerbreads na otu nke obodo ọtụtụ bakeries! Sweden adịghị enye ihe n'ụzọ dị iche iche nri nhọrọ, ma ị ga-chọrọ ihe ọ bụla ọzọ mgbe ị na-agbalị a cinnamon bun na a na-ekpo ọkụ na iko kọfị.
Ọzọkwa, ị ga-ohere ileta otu n'ime ndị kasị mara mma ochie obodo na Europe. Mgbe ahụ ị pụrụ iguzosi ike ijuanya na-achọ na ndị dị iche iche na mgbagwoju anya ọwa mmiri, osimiri ọwa, na ndị ọzọ.
Ị nwere ike nweta na Stockholm ụgbọ okporo ígwè si ọtụtụ ebe na Europe dị ka Sweden na-ejikọrọ site Copenhagen. Ọzọkwa, ị ga-achọ ime a ịzụ ụfọdụ nke ugwu akụkụ nke mba. Nke ahụ bụ ebe Northern Ìhè na-na-egbuke egbuke na kasị mara mma.
Budapest, isi obodo Hungary na obodo ya kacha maa mma, bụ otu n'ime ebe kasị mma na-eji Christmas na maka ọtụtụ ihe mere. Obodo dị na Osimiri Danube ma nye ụfọdụ ikpọ ụgbọ mmiri agafe. Ị pụrụ ịhụ ihe fọrọ nke nta niile nke mere ihe akụkọ ụlọ site n'osimiri.
Ọzọkwa, ị ga-ahụ pụtara Buda Castle na nzuko omeiwu Building. Ma ihe i nwere ike ime na oyi, e nwere ọtụtụ. Site na-agba ndị streetcars na iji atụrụ na Budapest Park ice rink, e nwere bụ mgbe nza nke ihe na-eme ebe a. Ọzọkwa, echefula ileta Christmas ahịa na Vorosmarty Square na Christmas mma na nnukwu ụlọ ụka Senti.
The Central okporo ígwè ojii na anya ka ọ bịara guzozie si a Harry Potter akwụkwọ bụ na center. Ọ na ejikọ Budapest ka ọtụtụ ndị isi obodo na Europe na ndị ọzọ. Abụọ ọzọ ụgbọ nwekwara ọtụtụ ụgbọ okporo ígwè e, Ndinam ejegharị ejegharị na-na si Budapest a ikuku.
Best Ọnọdụ ka Wepụta Christmas, pụrụ iche ghota – Strasbourg, France
Strasbourg bụghị nanị ndị kasị mma nhọrọ na-eji Christmas, ma ọ bụ nakwa na Christmas isi obodo. Ị gaghị agbaghara eleta nke a ọmarịcha obodo na Christmas.
Strasbourg obụrede mbụre 400 afọ Christmas ahịa, nke akọwa n'ụzọ doro anya na ọ dị mkpa nke Christmas n'obodo a.
Ọzọkwa, e nwere ihe a ọtụtụ ndị ọzọ ihe na-ahụ ma na-eme. Ị nwere ike ịga na ebube Strasbourg Cathedral ma ọ bụ na nnukwu 18nke na narị afọ Palais Rohan. I nwekwara ike na-ekiri na ihe ijuanya na nnukwu Christmas osisi nso Ịkekọrịta Village, ma ọ bụ na-akpagharị gburugburu obodo center. Nanị ihe na-bụ ụfọdụ bụ na ị gaghị na-Ịnọ nkịtị gwụrụ na a kpokọtara obodo.
Strasbourg dị na center nke Western Europe, na ókè-ala na Germany. Ya na ọnọdụ na-enyere ya jikọọ ọtụtụ ndị obodo na Europe. Na na-pụtara na-achọta a ụgbọ okporo ígwè na obodo ahụ ga-abụ nnọọ mfe.
Best Ọnọdụ ka Wepụta Christmas na ebe kasị mma na-ebi ndụ na – Geneva, Switzerland
Onye nke kasị mma ebe ke Europe, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ụwa, n'oge oyi, bụ Switzerland. Ọ bụ ya mere Geneva, otu n'ime loveliest obodo na Switzerland, bụ maa n'etiti ndị kasị mma obodo na-enwe Christmas.
The obodo akwuru na bịara n'ikperé mmiri nke Lake Geneva, na mgbe oyi-abịa, dum ọdọ bụ achasi. Ọtụtụ puku ndị ọkụ na-enwu si dị nso ụlọ ahịa, ụlọ, ụlọ ọha, na Christmas decorations.
Otu n'ime ihe ndị mere anyị ẹmende Geneva maka Best Ọnọdụ ka Wepụta Christmas blog bụ na Food hụrụ ga-aṅụrị ọṅụ dị ka obodo tupu-Christmas ahịa awade nri si n'ụwa nile. Ihe bụ ihe ọzọ, ị nwere ike ịga na ụlọ ahịa Na-eje ije na ndị Street, na mgbe ahụ gaa na ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị dị ịrịba ama akara. a na-agụnye Obí nke United Nations, St Pierre Cathedral, Water Jet, na ndị ọzọ.
E nwere mgbe ụgbọ oloko si obodo ndị ọzọ dị Switzerland ka Bern na Zurich na ike gị Geneva. Otú ọ dị, e nwekwara ọtụtụ ụgbọ oloko na-aga ma si Italy, France, Germany, na ndị ọzọ. The tracks na-aga site n'obodo dị ka Lausanne, Paris, Venice, Milan, Nice, Verona, na ọtụtụ ndị ọzọ. Ọzọkwa, Central okporo ígwè ebe bụ na nnọọ n'etiti obodo.
N'ihi ya, e na ị nwere ya, a zuru ndepụta nke ihe ndị kasị mma n'obodo na-eji Christmas. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu ihe na Train Njegharị na site na obodo ndị a, na-eche free Kpọtụrụ Save A Train n'oge ọ bụla.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-cities-christmas%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
#Hungary #traveleurope europetravel Sweden Atụmatụ trainjourney Tranride ụgbọ oloko traintip ụgbọ okporo ígwè Atụmatụ Train Travel ụgbọ okporo ígwè njem Atụmatụ ụgbọ okporo ígwè njem Travel travelamsterdam travelfrance travelswitzerland